Apple namoaka WatchOS 7.6.1 fanavaozana ny fiarovana | Vaovao IPhone
Apple dia namoaka ny watchOS 7.6.1 fanavaozana ny fiarovana
Ny orinasa Cupertino dia namoaka fanavaozana ho an'ny mpampiasa Apple Watch, amin'ity tranga ity dia ny watchOS kinova 7.6.1 izay ahitsiana ny fanatsarana ny fitoniana ary voavaha ny olana sasany amin'ny fandriam-pahalemana izay toa nisy ilay kinova teo aloha. Avy amin'i Apple dia ampirisihina hametraka ity kinova vaovao ity haingana araka izay azo atao amin'ny fitaovana rehetra mifanentana.
Amin'ity tranga ity dia navoaka vao haingana ireo kinova teo aloha, izay midika izany tao Cupertino dia nahamarika olana iray lehibe amin'ny fiarovana ianao na kilema ary namoaka ity kinova vaovao ity hametrahana anay Apple Watch.
Tsara homarihina fa ireo kinova ireo dia navoaka tampoka ka matetika tsy manampy fiovana amin'ny fampiasa amin'ny famantaranandro mihitsy na amin'ny rafitra mihoatra ny fampiasana ny manitsy olana na bibikely hita tao amin'ny kinova taloha. Ity kinova vaovao an'ny watchOS 7.6.1 ity dia toa ny tranga misy amin'ny fikaroham-bahaolana ihany ary navoaka minitra vitsy lasa izay.
Mba hametrahana ilay kinova vaovao dia alao antoka fa Apple Watch dia mifamatotra amin'ny charger sy eo amin'ny faritry ny iPhone mifandray amin'ny tamba-jotra Wi-Fi. Raha vantany vao azontsika izany rehetra izany dia azontsika atao ny manatanteraka ny fanavaozana tsy misy olana raha tsy ataontsika mandeha ho azy na ho antsika ny misintona hametraka ilay kinova amin'ny alina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Apple dia namoaka ny watchOS 7.6.1 fanavaozana ny fiarovana
Satria any Mexico dia tsy haiko ny Liberated, misy mahalala.
Fitsapana ny bateria MagSafe vaovao ho an'ny iPhone 12